EVY's Kitchen: Oatmeal Mix Fruits Cookies
Baking Essentials/ Principle
Oatmeal Mix Fruits Cookies
လုပ်ရတာလည်းလွယ် အ၀လည်းသက်သာစေမယ့် Cookies လေးပါ။ Oatmeal လဲပါတော့ ခါတိုင်းမုန့်တွေထက်စာရင်တော့ (ကျန်းမာရေးရှုထောင့်ကကြည့်ရင်) နဲနဲပိုကောင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ဆီကိုလည်း တတ်နိုင်သမျှနည်းနိုင်အောင် ကြိုးစားပြီးလျော့ထားပါတယ်။
2 small Eggs (beaten)
70ml vegetable oil
2 table spoon of honey
1 and 1/4 cup of all purpose flour
1 cup of dry mix fruits
လွယ်လွယ်လေး။ Group (1) ကိုအားလုံးသမအောင် ရောမွှေ။ Group (2) ကို ထည့် ပြီးသမအောင်ထပ်မွှေ။ မုန့်ကို ထမင်းစားဇွန်း တစ်ဇွန်းစာစီ ခပ်ပြီး မုန့်ဗန်းပေါ်တင်။ ပြီးရင် ၁၈၀ ဒီဂရီ စီ Oven မှာ ၁၅-၂၀ ထည့်ဖုတ်။ အအေးခံပြီးရင်စားလို့ရပါပြီ။
** Ingredients မှာOatmeal ကျန်ခဲ့လို့ ထပ်ဖြည့်ထားပါတယ်
Posted by Evy at 9:45 PM
ဒီဘလော့ဂ်မှာ မုန့်တွေ တော်တော်လေးကိုစုံနေပြီနော်:)
July 21, 2010 at 11:14 PM
My blog post - Cooking Simple Vegetables
April 18, 2013 at 10:36 PM
Hi, welcome to my blog!. I am Eve and I started baking only in 2009. Since then, baking and cooking have becomeapart of my life. I strongly believe that it is all about sharing with others and this makes my baking journey more meaningful.
EVY's Kitchen ၏ လွယ်ကူဆန်းသစ်သောမုန့်လုပ်နည်း သီးသန့်စာအုပ်
ရန်ကုန်၊ မန္တလေးရှိစာအုပ်ဆိုင်များတွင် ရနိုင်ပါပြီ
Coming up posts
ကျေးဇူးပြုပြီး Evy's Kitchen ၏ဓါတ်ပုံများ၊ စာများအား Credit မပေးပဲ တိုက်ရိုက်ကူးယူပြီး Fan Page များတွင်တင်ခြင်း မပြုလုပ်ပါရန်။
Baking (186) Cooking (138) Cake (93) သရေစာ (58) Burmese Food (47) Chicken (40) Veggie (38) Main Dish (36) Bread (28) Cookies (25) seafood (25) Pastry (24) Dessert (23) Misc (22) Cup Cakes (17) Layer Cakes (17) Cheese Cake (16) Swiss Roll (14) Eggs (12) ဗဟုသုတ (12) သက်သတ်လွတ် (12) Baking Principle (10) Festive Baking (10) Noodle (10) rice (10) Birthday Cake (9) Thai (9) Fish (8) brownies (7) Kids menu (6) Pudding (5) Beef (3) Muffin (3) video guide (3) အမေ့လက်ရာ (3) Nyonya (2) Western food (2) wow (2) Buttercake (1) Chiffon (1) Christimas (1) Christmas (1) Crepes (1) Diabetic Baking (1) Spring Roll (1)
ကညွတ်ကြော် အစပ် (Balacan Asparagus)
ကြက်တောင်ပံအစာသွပ်(Stuff Chicken Wings with Ginger...
ပျားရည်ကြက်ခြေထောက်ပေါင်း (Braised Chicken Feet wi...
Lo Mai Kai (or) ကြက်သားကောက်ညှင်းထုပ်
Sugar Almond Puff
Butter Milk Scones
Century Egg Salad (ဆေးဘဲဥသုပ်)
၃ နှစ်မြောက် ဘလော့နှစ်ပတ်လည် အမှတ်တရ
၁၀မိနစ်ဘိန်းမုန့်၊ Burmese Style Pancake
ပဲပလာတာ နဲ့ ပဲကြီးနှပ်
ဆနွင်းမကင်း (Burmese Traditional Semolina Cake)
May I refer
ဖြတ်လမ်းလိုက်ထားတဲ့ ၁၀ မိနစ်ဘိန်းမုန့်ပါ။ မပြည့်မစုံအလွယ်ဘိန်းမုန့်ပေါ့။ မစုံသာမစုံတာ အရသာကတော့ အပြည့်ပါဘဲ။ တနေ့က အိုင်အိုရာက ဘိန်းမုန့်လ...
ခုတစ်လော ကြည့်ဖြစ်နေတဲ့ အစီအစဉ်က Chef Martin Yan ရဲ့ ခရီးသွားတဲ့ အစီအစဉ်တွေပါ။ ကျွန်မက ရုပ်ရှင်ထက် အဲလို Documentary တွေကို ပိုစိတ်ဝင်...
လွယ်ကူမြန်ဆန်တဲ့ ငါးပိထမင်းကြော်ကတော့ ထိုင်းရိုးရာ ထမင်းကြော်နည်းတစ်ခုပါ။ ငါးပိ၊ ပုဇွန်ခြောက်ကို သုံးပြီး ကြက်ဥကိုကြော်ပါးပါးလှီး...
စားလို့ကောင်းတဲ့ ငါးထမင်းနယ်ပါ။ တော်တော်များများလုပ်တတ်ကြမယ်ထင်ပါတယ်။ လွယ်ကူမြန်ဆန်ပြီး အရသာရှိသော ထမင်းတစ်ပွဲဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။ ...
ဒီတစ်ခါတော့ ဗမာမုန့်ဖက် ခဏလှည့်လိုက်ဦးမယ်။ ဆနွင်းမကင်းကို အကြိမ်တော်တော်များများ စမ်းဖူးပါတယ်။ စိတ်တိုင်းသိတ်မကျတာနဲ့ လုပ်နည်...
Cotton Soft Cheese Cake
ဒီတစ်ခါမှာတော့ ၀ါဂွမ်းလို နူးညံ့တဲ့ ချိစ်ကိတ် လုပ်နည်းလေးကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ နာမည်နဲ့ လိုက်အောင် နူးနူးညံ့ညံ့နဲ့ အရသာဆိမ့်...
ချောကလက် Mille Crepes
အလွှာပေါင်းများစွာပါဝင်တဲ့ ကိတ်လုပ်နည်းတစ်ခုပါ။ ရိုးရိုးကိတ်တွေလိုမျိုး oven မွှေစက်စတာတွေ အသုံးပြုစရာမလိုပဲ မီးဖိုနဲ့ ဒယ်အိုးတစ်ခ...
တရုပ်နှစ်ကူးမှာ လုပ်စားဖြစ်တဲ့ ပြည်ဆန်လှော်မုန့်ဟင်းခါးပါ။ ပြည်က နာမည်ကြီး နွယ်နွယ်ဆန်လှော်မှုန့်ကို သုံးထားတာပါ။ အိမ်နဲ့က ရင်းနှီးနေတော့...
ခုတစ်လော ဗမာဟင်းတွေချည်းပဲ တင်ဖြစ်နေတယ်။ :D ချက်ဖြစ်တာလေးတွေကို ဓာတ်ပုံရိုက်ရင်းသဘောကျတာနဲ့ တင်ဖြစ်နေတာ။ စာဖတ်တဲ့သူတွေလဲ မျက်လုံးနဲ့စားလ...
Evy's Kitchen ၏ဓါတ်ပုံများ၊ စာများအား တိုက်ရိုက်ကူးယူပြီး Fan Page များတွင်တင်ခြင်း မပြုလုပ်ပါရန်.. Ethereal theme. Powered by Blogger.